Degmada Shiniile Oo Abaabulkii Waxbarashada Laga Qabtay - Cakaara News
Degmada Shiniile Oo Abaabulkii Waxbarashada Laga Qabtay
Shiniile (Cakaaranews)Axad 2da, October 2016. Abaabulka waxbarashada oo ah mid sanadwalba deegaanka bisha nahase iyo maskaram laga fuliyo dhamaan gobolada DDSI ayaa sidookale sanadkana siwayn uga socotaa abaabulka waxbarashada iyadoo degmada shiniile ee xarunta gobolka siti ay si heersare ah uga socoto.
Hadaba, mudane Nuur Cabdi Haajir oo ah khabiir katirsan Xafiiska Waxbarashada DDSI kana mid ah kooxda abaabulka waxbarashada kawada Gobolka Siti oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in si heersare ah ay u wadaan abaabulkii waxbarashada oo ujeedadiisu tahay in caruurta gaadhay dada waxbarashada lageeyo dugsiyada waxbarashada. Wuxuuna xusay in kooxdu ay yihiin koox iskudhaf ah oo ka kooban khabiiro iyo xildhibaano islamarkaana ay abaabulka kawadaan dhamaan tuulooyinka hoosyimaada degmooyinka gobolka siti. Wuxuuna carabka ku dhuftay in ay qabteen shirarbadan oo lagaqaygaliyay waalidiinta iyo caruurta labadaba islamarkaana lagagawada-hadlay faaiidooyinka waxbarashada iyo in ay lagama maarmaantahay in caruurta dada waxbarashada gaadhay la geeyo dugsiyada waxbarashada. Si loo tirtiro jahliga islamarkaana loo hirgaliyo yoolka iyo himilooyinka uyaala xafiiska waxbarashada DDSI.
Sidookale, Madaxa xafiiska waxbarashada Degmada Shiniile mudane Xuseen Cabaas Cabdulaahi ayaa tilmaamay in abaabul baladhan ay kasameeyeen degmada shiniile iyo qaarkamid ah tuulooyinka hoosyimaada islamarkaana lagu baraarujinayay waalidiinta iyo waxgaradka degmada in caruurta dadoodu gaadhay waxbarashada lageeyo dugsiyada waxbarashada.
Ugudanbayna khabiirka ayaa xusay in ilaa iyo hada aysan kooxdu lakulmin wax caqabad ah islamarkaana ay sifiican ugu socoto hawlihii abaabulka waxbarashada ee gobolka siti. Wuxuuna tilmaamay in hawlihii abaabulka waxbarahada ee gobolku uu marayo meel gabo gabo ah.